लक्षित राजस्व उठाउन असफल
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता नआएका कारण सरकार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लक्षित राजस्व उठाउन असफल भएको छ। अनुमानित राजस्वमा पनि संशोधन गरी (घटाउँदा समेत) गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो । राजस्वका सबै शीर्षकमा लक्ष्य हासिल भएन। आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएको मुलुकमा यसले आयातमा आएको कमी, उत्पादनमा ह्रास र आर्थिक गतिविधिमा छाएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको हो। पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न...
दाङ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घोरही उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा घोरही उपमहानगरपालिकाले रु १९ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा उपमहानगरले रु २१ करोड १८ लाख ७७ हजार ५३५ राजश्व सङ्कलन गरेको हो । उपमहानगरले विभिन्न १६७ शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी मालपोतबाट रु नै करोड ३३ लाख २६ हजार ५८२ सङ्कलन गरेको त्यहाँका राजश्व शाखाप्रमुख कृष्णकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी एकीकृत सम्पत्ति करबाट...
ब्रेन ट्युमरका विरामीलाई युएईमा रहेका नेपालीद्धारा सहयोग
पाल्पा । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका वडा न. ८ वराङ्दी घिउसीबासका हरि भुषालको निम्ति सहयोग जुटेको छ । व्रेन ट्युमरको समस्याले काठमाडौंको विर अस्पतालमा उपचार भइरहेका भुषालको निम्ति आर्थिक अभावको खवर सुनेपछि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले युएईमा रहेका पाल्पालीहरुले सहयोग गरेका हुन् । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका वडा न. ९ घर भएका तिलकराम बस्याल, राजु बस्याल,ईश्वरी बस्यालको नेतृत्वमा रु. एक लाख पचास हजार सहयोग संकलन गरि पठाइएको छ । स्थानिय कृष्णप्रसाद भुषाल मार्फत पठाइएको...
प्रभु बैंकको नाफा दोब्बर बढ्यो
काठमाडौं । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३ करोड ८९ लाख नाफा कमाएको छ । यो गतवर्षको तुलनामा शतप्रतिशत भन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ९६ करोड ७० लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकले सूचना निकाल्दै आफ्नो नाफा बढेको बताएको हो । यस्तै, बैंकले बचत पनि बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष जम्मा ९७ अर्ब २३ करोड बचतकर्तासँग संकलन गरेको बचत एक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब...
बुटवल । मौद्रिक नीतिले ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अब स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक करोडसम्मको कर्जमा मात्र स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको मौद्रिक नीतिले यसलाई घटाएर ५० लाख बनाएको हो। अबदेखि प्यान नम्बर नभएकाले एकपटक वा पटक/पटक गरी ५० लाखभन्दा बढी कर्जा लिन प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने छ। ...
कोष परिचालन बिषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठी
बुटवल । कोष परिचालन तथा व्यवसायीक सहकारी विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । तिलोतमा नगरपालिका ५ मणिग्राम बुटवलमा मंगलबार भएको गोष्ठीमा प्रदेश नं. ५ का १२ वटै जिल्लाबाट विषयगत सहकारी तथा जिल्ला संघहरूको सहभागी रहेको थियो । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा ८ वटा गुप्र विभाजन गरि सहकारी बोर्डको भुमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको बारे छलफल गरि प्रस्तुत गरिएको...
‘पक्की कुलो’ निर्माण स्थानीयवासीको श्रमदानमा
पाल्पा । पाल्पा निस्दी गाउँपालिका–६ अर्चलेका स्थानीयवासीको श्रमदानमा ‘पक्की कुलो’ निर्माण गरिएको छ । कच्ची कुलोले सिँचाइ सुविधा पुर्याउन कठिन परेपछि स्थानीयवासीले श्रमदान गरेर पक्की कुलो निर्माण गरेका हुन् । पार्कुला र चिदिबयाको बीच भागमा पर्ने बोगादी खोलामा बाँध बाँधेर ल्याइएको बोगादी कुलो पक्की निर्माण गर्ने काम हालसालै सम्पन्न भएपछि धान रोपाइँ गरिएको छ । एक रोपनी क्षेत्रफल बराबर चार जना उपभोक्ता गरी जम्मा २८० जनाको श्रमदानमा कुलो निर्माण गरिएको अनुगमन समितिका...
प्युठान सिमेन्टमा ८ अर्ब लगानी थपिँदै
काठमाडौं । प्युठान सिमेन्टले क्लिंकर उत्पादन क्षमता तीन गुणा बढाउन करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्ने तयारी गरेको छ। नौ सय मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्दै आएको शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिले क्षमता बढाएर तीन हजार टन पुर्याउन लागेको हो। अग्नी र प्युठान सिमेन्ट उत्पादन गर्दैै आएको उक्त समूहले आफ्ना दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्लिंकर अपुग भएपछि क्लिंकर प्लान्टको क्षमता बढाउन लागेको जनाएको छ। क्षमता बढाउनका लागि करिब आठ अर्ब...
दाङमा उद्योग खुल्ने क्रम बढे
दाङ  । दाङमा जिल्लामा राजनीतिक स्थिरतासँगै साना तथा मझौला उद्योग खुल्ने क्रम बढेको पाइएको छ । आव ०७५र७६ वर्षमा एक हजार ७२ वटा उद्योग थपिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा एक हजार ७२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आवको भन्दा बढी हो । एक हजार दुईवटा उद्योग दर्ता घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख वासुदेव रिजालका अनुसार जिल्लामा गत आवमा एक हजार दुईवटा उद्योग...
चीनसँग नेपालको व्यापार २ खर्ब घाटा
काठमाडौं । चीन र नेपालको व्यापार असन्तुलन बढ्न थालेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्चदरमा बढ्दै जाँदा व्यापार असन्तुलन चुलिँदै गएको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को ११ महिनामा नेपालले चीनसँगको व्यापारमा १ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै २९ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को ११ महिनामा चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ...